Cunnooyinka giraangiraha qaata waxay helayaan la yaab gu'ga gaarka ah - Cuntooyinka ku socda wheels
Cunnooyinka qaatayaasha Wheels waxay layaabaan gug gaar ah
Sidii ay ubaxyadu guga uugu dambayn u bilaabmeen inay ubaxaan, Cunnooyinka Cunnooyinka Gawaarida ee Minneapolis ayaa helay la yaab gaar ah oo ay weheliso cunnadooda caadiga ah.
Guga kasta, Machadka Farshaxanka ee Minneapolis ayaa qabta Farshaxanka xafladda Bloom halkaas oo farshaxanadu ku muujiyaan shaqooyinka madxafka ee ubaxa. Sannadkan, ubaxyadu waxay heleen nolol cusub oo ay la socdaan kuwa cuntada qaata dhacdada kadib.
Mutadawiciin ka socda barnaamijka Bloom After waxay ubaxyadoodii u diyaariyeen si quruxsan si loogu geeyo dadka cuntada ka helay Minneapolis. Tabaruceyaasha Barnaamijka Cunnada ee Cunnada Adeegyada Degdegga ah ee Bulshada (CES) ayaa markaa si sharaf leh ugu diyaariyay qabanqaabiyaasha kuwa cuntada qaata Isniinta, Abriil 30.
"Ubaxyadu waxay ahaayeen kuwo si weyn loo garaaco," ayay tiri Melanie LaPointe, Isuduwaha Ka Qaybqaadashada Tabaruca ee CES. Dhammaan macaamiisha way ku farxeen darawaladuna waxay jeclaayeen inay la yaabaan waxyaabo cusub oo qurux badan. Darawallo dhowr ah ayaa faallo ka bixiyay in xitaa ragga loo xiiqay inay ubax helaan, qaarna waxay xuseen inay ahayd markii ugu horreysay ee ay ubax helaan.
Waad ku mahadsan tahay Cuntooyinka Lugaha iyo Farshaxanka ee mutadawiciinta Bloom ee suurtagelinta gaarsiintaan gaarka ah. Adiga dartiis, Cunto qaatayaasha Cunnooyinka waxay awoodeen inay soo garaacaan guga iyagoo leh xoogaa kalsooni dheeraad ah!